“Riyo ayey ku jiraan xildhibaannadii xalay shir, Doorashada waa in ay xiligeeda ku dhacdaa” – Kalfadhi
“Riyo ayey ku jiraan xildhibaannadii xalay shir, Doorashada waa in ay xiligeeda ku dhacdaa”
Maanta waxaa xarunta mowlaca Macalin Nuur ka furmay Shirweynaha wada-tashiga Beelaha Mudullood, kaasoo qaban-qaabadiisa ay soo soctay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
Shirweynaha ayaa waxaa ka qeyb-galay Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Ra’iisul Wasaarihii hore, Madaxweynaha Hirshabeelle, siyaasiyiin, Wasiiro, Xildhibaano, duubabka dhaqanka Beesha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Sii hayaha xilka wasaaradda Amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Islow, oo kamid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeediyay shirka ayaa sheegay in doorashada ay ku dhacdo xiligeeda.
“Anniga xildhibaan ayaan soo ahaa tan iyo Baarlamaankii 8-aad, waan rabay in aan ku darsano balse Madaxweynayaashii xiligaasi Shariif iyo Xasan Sheekh wey diideen, sidaasi awgeed waxaan filayaa in madaxweynaheena Farmaajo uu qabto doorashada iyadoo aan hal maalin aan lagu darin”, ayuu yiri.
Wasiirka ayaa sheegay in ay dhicin karto in dhowr bilood lagu daro si farsamo ah laakiin doorashada waa in ay ku dhacdaa wakhtigeeda.
Xildhibaannadii xalay shiray waxaa ay isku sheegayeen in ay wakhti ku darsadaan, waxaan leeyahay xildhibaan ayaan ahay, xildhibaanayaal riyo ayaad ku jirtaan ee ka kaca. Anniga waan jeclaa in 4 iyo 8 sanno oo kale aan iska joogo laakiin waxaan jeclahay in aan ku imaado waddo sharci ah, maxaa yeelay dad badan ayaa sugaya kursigeyga, ayuu yiri.
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo xalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dalka loo badbaadin lahaa, una dhici laheyd doorasho qof iyo cod.
Tirada mudanayaasha ka qeyb-galay kulankii xalay oo gaarayay 58 xildhibaan, ayaa waxaa ay sheegeen in dalka Soomaaliyeed lagu celin doonno awooda si ay u doortaan qofka ay doonayaan.
Maxamuud Axmed Ciise (Runsheeg) ayaa oo akhriyay warka ka soo baxay Xildhibaannada ayaa sheegay in ay isugu yimaadeen inay samata bixiyaan dalka kana shaqeeyaan doorasho qof iyo Cod ah, isla markaana Xildhibaannada Golaha Shacabka ay mideeyaan.
Maanta maxaa looga hadlayaa kulanka Golaha Shacabka?
Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay dib-u-eegista iyo ku-noqashada miisaaniyadda sannadka 2020